Sawirro: 20 Qof Kenyaan Ah Oo Ku Dhintay Dab Ka Kacay Magaalada Nairobi.
Thursday June 28, 2018 - 11:55:58 in Wararka by Super Admin
Wararka laga helayo wadanka Kenya ayaa tibaaxaya in dab xooggan oo kakacay suuq ku yaala magaalada Nairobi ay ku dhinteen tobaneeyo qof, sidoo kale ay ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya 70 qof.
Dabka oo ahaa mid xooggan ayaa xalay Saqdii dhexe ka kacay suuqa Gikomba oo kamid ah suuqyada ugu mashquulka badan wadanka Kenya kuna yaala magaalada caasimada ah ee Nairobi.
Inta la xaqiijiyey 20 qof ayaa ku geeriyooday dabkan in kabadan 100 kalena waxaa kasoo gaaray dhaawacyo kuwaas oo qaarkood la sheegaayo in heerka gubashadooda uu yhay mid culus uuna gaarsiisanyahay darajada 3aad sida ay dhakhaatiirtu ku waramayaan.
Inta badan dadka ay dhaawacyadu soo gaareen ayaa la dhigay Isbitalka Kenyatta ee ku yaala magaalada Nairobi ahna isbitalka ugu weyn dalka Kenya halkaas oo xaaladooda lagula tacaalayo.
Dhakhaatiirta ka howlgalaya isbitallada caafimaad ee la dhigay dhaawacyada ayaa sheegaya inay suurta gal tahay in tirada dhimashada ay sare usii kacdo saacadaha soo socda sababo ku aaddan dhaawacyada qaar oo xaaladooda ay aad u liidato.
Saraakiil u hadlay police-ka Kenya ayaa sheegay in badanaa dadka dhintay iyo kuwa dhaawacyada qaba ay yihiin ganacsatadii halkaas kulahaa dukaamada dabkuna oo qabsaday xilli ay isku dayayeen inay hantidooda kalasoo baxaan suuqa gubanaya.
Kooxaha gurmadka Degdega ah ee loo yaqaan Dabdamiska ayaa sheegay in dabku uu ahaa mid aad ufaafaya ayna u dhawwaan waayeen goobaha uu sida aadka ah kaga holcayey, balse ay saaka aroorti saacadu markii ay ahayd 4:40 daqiiqo ay ku guuleysteen in ay damiyaan, walina ay kuguda jiraan baaritaanno ay baadi goobayaan hadii ay jiraan dad meydad ah oo burburka ku hoos jira.
Dhismayaasha basbeelay ee dabku sida daran uu uhalakeeyay ayaa lagusoo waramayaa inay gaarayaan 17 goob oo kala duwan oo ay ku baaba'day dhammaan wixii hanti ahaa ee halkaa yiilay, oo lagu qiyaasayo inay gaareyso lacago dhowr milyan oo dollar ah.
Gubashada Suuqa Gikomba ayaa ah mid soo noqnoqtay, waxaana la sheegaya in tiro dhowr jeer ah uu dab kakacay.
Sanadii 2012 ayuu suuqani gubtay 1 jeer, sanadkii 2014kana waxa uu gubtay tiro laba jeer ah, sanadkii 2015kana waxa uu gubtay laba jeer, sanadkii 2017kana waxa uu gubtay laba jeer oo kale, sanadkan 2018kana markaan ayaa kow u ah.
Sawirro: Hormuud oo Deeq Raashin ah u qeybisay Qaar ka mid ah qoysaska Danta yar.